China HSL-YTJ2621 otomatiki Girazi Kutema Muchina vagadziri uye vanotengesa | Huashili
3829 otomatiki Girazi Loadin ...
2716 Sintered Stone Kucheka ...
HSL-YTJ2621 Automatic Glass ...
HSL-YTJ2621 otomatiki Girazi Kutema Muchina
Iyi modhi igirazi yekucheka girazi, iyo inosanganisa otomatiki kurodha girazi, otomatiki kunyora, telescopic ruoko basa, uye otomatiki yekucheka muchina. Iyo inokodzera yakatwasuka uye yakaumbwa kucheka kwegirazi mukuvaka, kushongedza, midziyo yemumba, magirazi, uye hunyanzvi.
Functions Standard mabasa Kucheka optimization software 1.Professional girazi rekucheka uye rakagadziriswazve kuisa mushe basa: inovandudza zvakanyanya chiyero chegirazi nekugadzira kugona.
Inopindirana neItaly OPTIMA yakagadziridzwa software uye yekumba GUIYOU software yakajairwa G kodhi: Ziva iyo yakasarudzika yemhando dzakasiyana mafaira.
3.Fault kuongororwa uye alarm basa: Iyo inogona otomatiki kunyora inomhanya mamiriro emuchina mune yekugadzira maitiro, mhosva alarm uye kuratidza matambudziko.
1. otomatiki kumucheto-kutsvaga uye kumisikidza girazi: Yakanyatso kuyerwa kwenzvimbo chaiyo uye yekutsausa kona yegirazi, uchiona otomatiki kugadzirisa kwenzira yekucheka nzira yejasi, nekuvandudza mashandiro
2.Ingwara yakaumbwa pakuvheneka: Iyo detector inogona kungwara tarisa izvo zvakaumbwa zvinhu uye otomatiki kuburitsa giraidhi kuti uone contour yekucheka.
Cheka tekinoroji Iyo yekucheka reza kumanikidzwa inodzorwa neelectromechanical chaiyo yekumanikidza inodzora vharuvhu, uye iyo humburumbira inosundira kumanikidza zvakaenzana kuti iite iro banga rienzane zvakakwana pamusoro pegirazi rekucheka, kudzivisa kusvetuka nekuda kwematambudziko ehunhu hwegirazi.
Inesarudzo basa Telescopic ruoko runoshanda Yakakwira chaiyo pinion uye rack drive inogamuchirwa kutsiva iyo yekutanga sikuru dhiraivha, nguva yega yega kurodha kunopedzwa neye telescopic ruoko kufamba, muchina haudi kufamba.
Inogona kudzorwa nekomputa kuzvimiririra, uye otomatiki kurodha uye kucheka zvinogona kupedzwa pasina manyorero kupindira, iyo inovandudza zvakanyanya kugona;
Nekuda kwekudzikiswa kwenhamba yekufamba, kupfeka kwechimakanika kwakaderedzwa zvakanyanya uye hupenyu uye kugadzikana kwemuchina kunovandudzwa.
Otomatiki kunyora Tsiva manyorerwo emawoko. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, anodhinda anodhindisa zvinyorwa zvinorekodha ruzivo rwegirazi.
Chinyorwa chinoshandiswa kune inoenderana girazi pamusoro neiyo yekunyora humburumbira.
(Tinokurudzira vatengi kugadzirisa basa rekunyora)
Girazi kuputsa basa Isa iyo ejector tsvimbo papuratifomu yekucheka.
Iyo humburumbira inosundira iyo ejector tsvimbo kuti ibvise girazi.
KutakuraZvimiro Iyo yekucheka danda yakagadzirirwa iyo yekufambisa yekuyamwa. Iko hakuna kudikanwa kwekushandura girazi nemaoko.
Girazi rakachekwa rinogona kuendeswa kumhepo inoyerera girazi ichityora tafura kuburikidza neanosimudza sucker, uye iko kuvhiya kunoitwa kunoitwa pagirazi rinopwanya tafura.
Chikamu Chirongwa Mirayiridzo yeProjekti Tarira
Chigadzirwa kumisikidzwa Zvokuimba chikamu Muchinafuremu Kuchembera kurapwa mushure mekumonera kwezvikamu zvakakora. Rutivi danda kugadzira ndiro inoitwa ne gantry hwokugaya hwakarurama uye kugadzikana.
Flat danda X-axis uye Y-axis inomhanya yakati sandara matanda anotora yakasarudzika patent aruminiyamu chiwanikwa profiles, ayo ane simba rakakwirira uye epamusoro kunyatsoita, uye anogara nekusimba.
Rack Kugamuchira helical rack uye piniini dhizaini yekuvandudza zino simba pasimba uye zvinobudirira kudzora ruzha
Kuwanikwa kwemafuta Iko kugoverwa kwemafuta kwebara rekucheka kunotora iyo pneumatic otomatiki oiri yekuzadza nzira, pasina chinyorwa kupindira.
Feni Yakasarudzika yepamusoro-simba fan, yakasimba mhepo kumanikidza uye kuyerera kukuru, simbisa yakatsetseka girazi kuyangarara.
Kucheka mota mota 2 seta yakakwira kuita kwemaindasitiri kudzora yakatsaurwa servo mota yekunyatso kudzora uye kumeso kushanda.
Mesa Iyo yepamusoro-density isina mvura bhodhi iri substrate, uye iyo yepamusoro yakafukidzwa neanti-static maindasitiri akanzwa. Ita shuwa kushandiswa kwakagadzikana munzvimbo dzakanyorovera.
Zvikamu zvemagetsi Inobata komputa Yakakwira-kuita komputa inomiririra yeindasitiri kutonga; chiratidzo chepamusoro-resolution kuratidza.
Mutungamiriri Huashil yakakosha yekudzora bhodhi kadhi, yakakwana mutambo Toshiba PLC inodzora system.
Optical faibha Zvishandiso Panasonic laser michina inotumirwa kubva kuJapan.
Element Yakatumirwa kune dzimwe nyika yekutanga-mutsara brand control zvikamu senge OMRON, Panasonic.
Technical Parameter Machine parameter Zviyero Kureba * upamhi * kukwirira: 3000mm * 4700mm * 1420mm
Kureba kwetafura 880 ± 30mm (tsoka chinoshanduka）
Simba rinodikanwa 3P, 380V, 50Hz
Yakaiswa simba 13kW, Shandisa simba3KW
Yakamanikidzwa mweya 0.6Mpa
Kugadzirisa parameter Cheka saizi yegirazi MAX. 2440 * 2000mm
Cheka girazi ukobvu 2 ~ 19mm
Musoro danda kumhanya X axis 0 ～ 200m / min (inogona kuiswa)
Kumhanya kwemusoro Y axis 0 ～ 200m / min (inogona kuiswa)
Kucheka kumhanyisa ≥6m / s²
Kucheka banga chigaro Kucheka musoro kunogona kutenderera madhigirii makumi matatu (kunyatso kucheka mitsara yakatwasuka uye maumbirwo akasarudzika)
Kucheka kunyatso ≤ ± 0.2mm / m （Kubva pane saizi yetambo yekucheka girazi risati ratsemuka）
Name Brand Rudzi Feature Tarira
Kucheka software Weihong China Yakavimbiswa kururamisa
Linear mativi njanji T-kukunda Taiwan
Zvigadzirwa zvemagetsi AirTAC Taiwan
Solenoid vharafu AirTAC Taiwan
Photoelectric switch Omron Japani
Encoder Omron Japani
Kucheka banga Bohle Jerimani
Yakapfava mutsetse Kangerde China
Windpipe Zuva Rinobuda Taiwan
XX akabatana servo mota KUFA China 1.8KW * 2 Intel machipisi
Y akabatana servo mota KUFA China 2.2KW
Kutsika mota EKP China 1kw
Kudzora Sisitimu Toshiba Japani
Contactor Schneider Furanzi
Kutakura kukuru NSK Japani
Zvepakati ataure AirTAC Taiwan
Mhepo inoyerera mudziyo Customization China Customization 3KW
Proximity switch Omron Japani
Scanner Panasonic Japani
Mhosva yekuona system HUASHIL China
Gear pani T-kukunda Taiwan
Tarira：Nekuda kwekuenderera kuri kuvandudzwa kwemidziyo, zvimwe zvinhu zvinoshandurwa, uye vanamuzvinabhizimusi vekutsvaga vachakunda pane yazvino modhi.
Pashure: HSL-CNC3826 otomatiki Girazi Kutema Muchina
Zvadaro: HSL-YTJ3826 otomatiki Girazi Kutema Muchina + HSL-BPT3826 Girazi Rekuputsa Tafura
Otomatiki Flat Girazi Kutema Muchina Mutengo
Otomatiki Girazi Kucheka Gungano Line
Otomatiki Girazi Kuisa Uye Kucheka Muchina
Otomatiki Kunyora Girazi Kutema Muchina
Otomatiki Laminated Girazi Kutema Muchina
Yakazara otomatiki Cnc Girazi Kucheka Machines
Yakazara Yega Girazi Kutema Muchina
Girazi otomatiki Kuisa Uye Kucheka Muchina
Girazi Kuisa Machine Quotation- RMB
HSL-YTJ3826 otomatiki Girazi Kutema Muchina + HSL ...
3826 otomatiki girazi rekucheka mutsetse